ब्लग - साहित्य/ अध्यात्म
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Oct 17 2018
नवरात्रको नवौं दिन "सिद्धिदात्री"को महत्त्व
नवरात्रको नवौं दिन सिद्धिदात्री स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दुर्गा, आफ्नो नवौं स्वरूपमा सिद्धिदात्रीको नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । नाम अनुसार देवी यस विग्रहमा आफ्नो साधकलाई सबै प्रकारको सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Oct 16 2018
नवरात्रको आठौँ दिन "महागौरी"को महत्त्व
नवरात्रको आठौँ दिन महागौरी स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दु¬र्गा, आफ्नो आठौँ स्वरूपमा महागौरीको नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । पौराणिक कथा अनुसार वहाँको आयु आठ वर्षकी बालिकाको जस्तै छ, वहाँको स्वरूप अत्यन्त मनोहर, सुन्दर तथा दिव्य छ, देवी महागौरी शंख, चन्द्र इत्यादि जस्तै पूर्णतः गौर वर्णकी हुनुहुन्छ ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Oct 15 2018
नवरात्रको सातौं दिन "कालरात्रि"को महत्त्व
नवरात्रको छैटौं दिन कालरात्रि स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दु¬र्गा, आफ्नो सातौं स्वरूपमा कालरात्रिको नामले विख्यात हुनुहुन्छ । देवी कालरात्रि घोर अन्धकार जस्तै कालो रङ्ग युक्त शारीरिक वर्ण भएको हुनुहुन्छ, यसै कारण देवी १ कालरात्रि नामले विख्यात हुनुहुन्छ ।
नवरात्रको छैटौं दिन "कात्यायनी"को महत्त्व
नवरात्रको छैटौं दिन कात्यायनी स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दु¬र्गा, आफ्नो छैटौं स्वरूपमा चन्द्रघण्टाको नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । पौराणिक कथा अनुसार कत नामको एक प्रशिद्ध महर्षि हुनुहुन्थ्यो, वहाँको पुत्र कात्य भए र त्यहि कात्यको गोत्रमा प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुनुभयो ।
नवरात्रको पाँचौं दिन स्कन्दमाता स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दुर्गा, आफ्नो पाँचौं स्वरूपमा स्कन्दमाता नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । शिव तथा पार्वतीका पुत्र कुमार या कार्तिकेयको अर्को नाम स्कन्द हो । पौराणिक कथा अनुसार देवासुर संग्राममा देवताहरूको सेनापति स्कन्द हुनुहुन्थ्यो र स्कन्दले नै दैत्य(पति तारकासुरको वध गर्नुभएको थियो ।
नवरात्रको चौथो दिन "कुष्माण्डा"को विशेषता
नवरात्रको चौथो दिन कुष्माण्डा स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दुर्गा, आफ्नो चौथो स्वरूपमा कुष्माण्डा नामले प्रसिद्ध हुनुहुन्छ । ब्रह्म या अण्डलाई उत्पन्न गरेको कारण वहाँलाई कुष्माण्डा नामले चिनिन्छ । तीन नेत्रले युक्त देवी आफ्नो मस्तकमा अर्ध चन्द्र धारण गर्नेवाली, अष्ट भुजाहरूले युक्त, एवं आफ्नो भुजाहरूले नाना प्रकारको आभूषण धारण गर्ने, देवी कुष्माण्डा आफ्नो भुजाहरूमा चक्र, गदा, कलश, जप माला, कमण्डलु, धनुष, बाण तथा कमल पुष्प धारण गर्नुहुन्छ ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Oct 11 2018
नवरात्रको तेस्रो दिन "चन्द्रघण्टा"को विशेषता
नवरात्रको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दु­र्गा, आफ्नो तृतीय स्वरूपमा चन्द्रघण्टा नामले विख्यात हुनुहुन्छ । वहाँको मस्तकमा घण्टीको आकर जस्तै अर्धचन्द्र धारण गरेकी हुनाले चन्द्रघण्टा नाम रहन गएको हो । वहाँको शारीरिक वर्ण स्वर्णको जस्तै छ, दस बाहुले युक्त देवी चन्द्रघण्टा त्रिशूल, गदा, तरवार, कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अक्षर माला धारण गरेकी साथै वरद तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित गरेकी देवीको चन्द्रघण्टाको वाहन बाघ हो ।
नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री स्वरूप नवदुर्गा भवानीको आराधना गरिन्छ । देवी दुर्गा, आफ्नो प्रथम स्वरूपमा शैलपुत्री नामले विख्यात हुनुहुन्छ । पर्वत(राज हिमालयको घरमा पुत्रीको स्वरूपमा जन्म लिएको कारण शैलपुत्री नाम रहन गएको मानिन्छ । शैलपुत्री शब्द दुईवटा शब्दबाट बनेको छ, पहिलो शैल र दोस्रो पुत्री मिलेर शैलपुत्रीशब्द निर्माण भएको हो । हिमालय राजा शैलकी पुत्री शैलपुत्री मस्तकमा अर्ध चन्द्र, नाना आभूषण, मुकुट इत्यादि धारण गरेकी एवं अत्यन्त मनोहर स्वरूपमा सजिएकी देवीको वाहन वृष अर्थात् साँढे हो ।
महिला शक्तिको ९ स्वरुप, महिला अास्थाका ९ महत्व तथा महिला शक्तिकाे ९ फरक विश्वासको साधनाको विशेष चाड बडादशैंको रौनक प्रारम्भ हुँदैछ । शक्तिस्वरुपा ९ देवीको साधना गर्नाले परीवार, समाज, तथा व्यक्ति विशेषमा खुशीयाली प्राप्त हुनुका साथै चिताएका कुरा पुरा हुने विश्वास छ ।
'कलौ चण्डी विनायकौ' उक्ति अनुसार कलियुगमा चण्डी-दुर्गा र विनायक-गणेशजी प्रधान एवं प्रथम पुज्य छन् अत: जगत् जननी माता दुर्गाभवानी धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी चार पुरुषार्थ प्रदान गर्ने देवीको रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ । अखिल ब्रह्माण्डनायिका मातेश्वरी श्रीदुर्गा भवानी परमेश्वरको प्रधान शक्तिहरू मध्येको एक हो ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Jul 27 2018
२१औं शताब्दीको सबैभन्दा लामो यो खग्रास चन्द्रगहण नेपाल, भारत, एशिया, अस्ट्रेलिया, रुस, युरोप लगायत केहि अफ्रिका र उत्तरी अमेरिका सहित विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देखिनेछ । यो चन्द्रग्रहणलाई ब्लडमून पनि भनिएकोछ, केहि समय तामा जस्तै रातो र केहि समय पुरै रातो देखिने भएकाले यस खग्रास चन्द्रग्रहणलाई ब्लडमूनू भनिएको हो, यस्तो संयोग १०० वर्षभन्दा पछि आएको हो ।
श्रावण र रुद्रीको महिमा
सती देवीले दोस्रो जन्ममा हिमालय पर्वतमा रानी मेनकाको गर्भबाट पार्वतीका रुपमा जन्म लिनु भयो र देवी पार्वतीले बाल्य अवस्था देखि नै यसै पवित्र श्रावण महिनामा श्रद्धा एवं भक्तिले निराहार रही कठोर तपस्या गरेर आशुतोष भगवान् शिवजीलाई खुसीपारी विवाह गर्नु भयो र पुनर्मिलन हुनुभएको थियो यसै कारणले शिवजीलाई यो श्रावण महिना अविस्मरणीय भै अति प्रिय हुन गएको पौराणिक मान्यता छ ।
रघुनाथ ढुङ्गेल - Jun 28 2018
न्वारनको नाम किन र कस्तो अवस्थामा फरक पर्न सक्छ?
हाम्रो संस्कार अनुसार बालवालिकाको जन्म भएको एघार दिनभित्र न्वारान गरेर नामाकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नामाकरण गर्न तथा नवजात शीशुको जन्मकुण्डली तयार पार्न शीशु जन्मीएको मिति (Time of Birth, TOB) (Place of Birth or POB with Time Zone or TZ, Longitude, Latitude and if applicable Daylight Saving Time or DLT as well )मा नवग्रहहरुको स्थिति वा भोगांशको विशुद्ध गणना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
- Jun 05 2018
पुरुषोत्तम मासमा गर्नु पर्ने दानहरु
मलमास भनिएक कारणले आफ्नो स्वामित्वको खोजी गर्दै अधिकमासले बिलौना गरेपछि अधिकमासको स्वामित्व भगवान बिष्णु स्वयले लिएको रोचक कथा छ । श्रीकृष्ण स्वयमले मलमासलाई आफ्नो हरेक गुणले भरिपूर्ण गरिदिने वचन दिएका कारणले मलमास बिशेष मानिन्छ
Suyog Dhakal - Jun 05 2018
जीवन र मृत्यु
जीवनको बास्तविक मुल्य, उदेश्य अनि मृत्युलाई एउटा अर्थपूर्ण समापनको स्वरुप दिनका लागि जीवनमा चेतना अनि सत्कर्मको महत्वमा भागवत गीता केन्दित देखिन्छ ।
जन्म कुण्डली भनेको जातकको जन्मस्थान, जन्ममिति र जन्मसमय सहित खगोलीय एवं भूगोलीय अवस्थितिहरूको अभिलेख राखिने वैज्ञानिक दस्तावेज अर्थात् चिनारी नै जन्म कुण्डली या चिना हो, जुन पारीवारीक पण्डित, ज्योतिषशास्त्रीहरूको सहयोगमा बनाउन सकिन्छ ।
Suyog Dhakal - May 30 2018
को हुन् राम ?
थाइहरुको रामायणको संस्करण इन्डोनेसियालीकाभन्दा फरक छन् र वाल्मिकीको कथाभन्दा फरक छन् । कुनैमा रावण सत्पात्रका रुपमा प्रस्तुत भएका छन्, न कि राम । कुनैमा सीता रामकी बहिनी मानिएका छन् । लाओसको रामायणको संस्करणमा लक्ष्मणलाई मुख्य पात्र र रामलाई सहयोगी पात्रका रुपमा देखाइएको छ ।
के हो मनुस्मृति ?
मनुस्मृतिमा समाजमा मानिसहरुले गर्नुपर्ने आचरणको संग्रहण तथा संगठन गरिएको छ । यसको अस्तित्व करिब १८ सय वर्षअघि भएको मानिन्छ जुन समयमा यग्नमा आधारित वेदिक हिन्दू धर्म मन्दिरमा आधारित पौराणिक हिन्दू धर्ममा परिणत हुँदै गइरहेको थियो ।
कबीरका लेखहरुमा विविधता पाइन्छ । उनी चिन्तनशील लेख जति लेख्थे, त्यति नै अस्तित्ववादसम्बन्धि पनि लेख्थे । उनको अनुवादित कृति “सङस् अफ कबीर”ले कविका यी भिन्नभिन्न लयलाई नौ वटा अध्यायमा विभाजित गर्दै विश्व पाठकसामु प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - May 15 2018
शनि जयन्तीको महत्त्व
ज्येष्ठकृष्ण औंशीको दिन शनि जयन्तीको रुपमा मनाउने गरिन्छ । मानिन्छ कि यसदिन शनिदेवको पूजा एवम् आराधना गर्नाले सम्पूर्ण शनिको ग्रहजन्य दुश्प्रभाव र अशुभफल नासभई मनोवाञ्छित शुभफल मिल्ने शास्त्रीय कथन छ । जो जातक शनिको दुष्प्रभावले अनेकौं समस्या झेलिरहेकाछन् उनीहरुकोलागि शनि जयन्ती कल्याणकारीअनि रामबाण सिद्ध हुनसक्दछ ।
भागवत गीतामा पनि उल्लेख छ कि दिमागले नियन्त्रण गरेको सोचले भौतिकतामा वहुवस्तुहरु देख्दछ तर आत्माले नियन्त्रण गरेको सोचले एकात्मकता अनि सहजता देख्दछ । रासलीला मै फर्कने हो भनें रासको अर्थ हुन्छ प्रेमको सर्वसुन्दर स्वरुप ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - May 10 2018
पुरुषोत्तममास (मलमास) को महत्त्व
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार सूर्यको गतिलाई आधार मानि गणना गरिने वर्षलाई सौर्यवर्ष भनिन्छ र यो सौर्यवर्षको मान ३६५ दिन १५ घडी २२ पला र ५७ विपला हुन्छ । जबकि चन्द्रमाको गतिको आधारमा गणना गरिने वर्षलाई चान्द्रवर्ष भनिन्छ । चाद्रवर्ष ३५४ दिन २२ घडी १ पला र २३ विपलाको हुन्छ ।
Suyog Dhakal - May 04 2018
पाँच पाण्डवको मृत्यु
द्रौपदीले उनका पाँचै श्रीमान रुलाई बराबर माया दिने वाचा गरेकी थिइन् तर उनले कहिल्यै त्यसो गर्न सकिनन् । उनले सधैँ अर्जुनलाई मात्र माया गरिन् र उनको मात्र पत्नी बन्ने लालसा राखिन् ।
Suyog Dhakal - Apr 30 2018
शान्ति संभव छ,बुद्धजयन्ती विशेष
शान्तिको रहर आज सबैलाई छ, चन्द्रमामा पुगेको मान्छे आँफैभित्र चाँही रुमलिएको देखिन्छ । विल्कुलै एउटा कस्तुरि मृग जस्तो, आँफैभित्र भएको शान्तिलाई पहिल्याउन नसक्दा आज मान्छेहरु अन्य बिभिन्न भौतिक कुरा र दुव्र्यसनमा शान्तिको खोजी गर्न थालेका छन् ।
Suyog Dhakal - Apr 28 2018
राम र सीताको कथाबाट सिक्न सकिने पाठ
राम र सीतलाई दुई फरक व्यक्तित्व मानिँदैन । सीतालाई रामको नारी प्रतिबिम्ब मानिन्छ भने राम सीताको कार्यशक्ति हो । उनीहरुको मानवीय अस्तित्व उनीहरुबीचको गहिरो एकताको बिम्ब हो ।
Suyog Dhakal - Apr 23 2018
भागवद गीताका दश जीवनोपयोगी सन्देशहरु
पुरातन र अप्रचलित भन्दै हामीले यस्ता धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन गर्न छोडिसकेका छौँ । पश्चिमा मुलुकहरु भागवद गीता लगायतको सार बुझ्न अघि सर्दा हामी शाब्दिक अर्थमै अड्किएर पुरातन भन्दै यस्ता ग्रन्थहरु थन्क्याउने गर्दछौँ ।
Suyog Dhakal - Apr 15 2018
नव वर्ष प्रवेश गणेश मन्त्र
श्री गणेशलाई बाधाअवरोधका मुक्तिदाता भनेर पनि चिनिन्छ । श्री गणेशको मन्त्रोच्चारणले नव वर्षमा प्रवेश गर्दा हामी हाम्रो लक्ष्यतर्पm उन्मुख हुन्छौँ भने बाधाहरुबाट मुक्ति पाउँछौँ । नव वर्षमा श्री गणेशको मूल मन्त्र ॐ गं गंपतये नमः को मन्त्रोच्चारण गरी नव वर्षतर्पm लम्किदाँ बाधाअड्चनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
ज्योतिष पण्डित नारायण प्रसाद दुलालद्वारा तयार पारिएको यस वार्षिक राशिफल (विक्रम सम्वत् २०७५) मा मूलतः ८ वटा क्षेत्र जस्तैः व्यापार/व्यवसाय, प्रेम/सम्बन्ध, शिक्षा, पेशा/रोजगार, स्वास्थ्य, शुभ रङ्ग, शुभ अङ्क, दर्शन/पूजा/उपायहरू समेटिएका छन् ।
ॐ नमः शिवायको अर्थ र महत्व
ॐ– यस ब्रह्माण्डको उत्पति अघि, यहाँ शुद्ध अस्तित्व वा शुन्यता रहेको थियो । यही शुन्यताबाट कम्पनको सिर्जना भयो, जसलाई ॐ भनिन्छ । बिस्तारै ब्रह्माण्डको सुरुवात हुन पुगेको थियो ।
- Apr 07 2018
हिन्दू धर्मका २५ अनौठा तथ्यहरु
सिंगापुर हिन्दू धर्मको वास्तुको आधारमा निर्माण भएको सहर हो । यसलाई संसारभरका आधुनिक वास्तुनिर्माताले प्रशंसा गर्ने गर्दछन् भने यही रेखाचित्रको अनुसरण गर्ने मानिसहरु पनि छन् ।
Suyog Dhakal - Apr 03 2018
संस्कार र बालबालिका
नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । हिन्दू धर्मको बाहुल्यता भएपनि सबै धर्मलाई उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने देखेर नेपालले धर्मनिरपेक्षको बाटो रोजेको हो । हामीमध्ये धेरै हिन्दू त छौँ तर हिन्द्र धर्मको संस्कारलाई बिस्तारै त्याग्दै गइरहेका छौँ । सानो छँदा मन्दिरमा घण्टी किन बजाउनुपर्छ भनेर आमालाई सोध्दा, आमासँग यसको जवाफ थिएन । बुवाले हामी हिन्दू हो, मन्दिरमा हिन्दूहरुले घण्टी बजाउनुपर्छ त भनिदिनुभयो तर चित्त बुझ्दो जवाफ पाइएन । मन्दिर जाँदा घण्टी बजाउने गरेपनि म आपैmँ अनुत्तरित छु, म घण्टी किन बजाउँछु भन्नेबारे ।
एकपटक सोच्नुस् त ! यदि मूर्ख नै नभए यो संसार कस्तो हुन्थ्यो होला ! हामी भन्ने गर्दछौं जो संग बुद्धि र विवेक छैन त्यो मूर्ख हो | जनावरहरू विद्वान् हुँदैनन् त्यसैले उनिहरू मूर्ख पनि हुँदैनन् | विश्वमा मनुष्यमात्रै विद्वान र मूर्ख हुन्छन् । यो संसारमा मुर्खहरू नभए विद्वान हरूको अस्तित्व हुँदैन थियो होला |
भारतवर्ष अहिलेको इरान अर्थात पर्सिया संग अत्यन्त निकट रहेको छ । पर्सीयन राजा द्वारा साइकोसले सन् १६६७ मा वेद, उपनिषद् लगायतको पर्सीयन अनुवाद गरेको इतिहास छ । पश्चिमाहरुले पूर्वीय सभ्यता अनि रहनसहन बुझ्न पर्सीयन भाषा र सम्बन्ध प्रयोग गरेको भने प्रशस्तै उदहारण छ । युरोप र पर्सिया उ बेला देखि अत्यन्त निकट थिए । द्वारा साइकोसको पर्सीयन अनुवादलाई एकजना फ्रेन्च अनुवादकले ल्याटीन भाषामा अनुवाद गरेको इतिहास डाक्टर नेरिया हेब्बरले आफ्नो शोधमा उल्लेख गरेको हामीले पायौं ।
Suyog Dhakal - Mar 25 2018
जनकपुरधामको बगैंचामा अयोध्या वाट घुम्न पुगेका राम अनि मिथिला राज्य कि राजकुमारी सीता को बिवाहका प्रसंग र कारणहरु लाई धर्नुबिधा अनि केवल संयोगका रुपमा सनातन धर्म अनुयायीहरुले लिनु भ्रम या अर्धसत्य मात्र हो । राम र सीता बिचमा प्रथम देखादेख बगैंचामा भएको बताइन्छ अनि आजभोलीका चलचित्रमा झैं लभ एट फस्र्ट साइट झैं यि दुई सुकुमार प्रेमीहरु प्रेमसमबन्धमा परिसकेको भनक बाल्मीकि रामायण दिन्छ ।
वहाँलाई रुढिवादीको बिरोध गर्दै आधुनिकतामा हिन्दुत्वलाई लैजाने एक महान ब्यक्तिका रुपमा पनि लिइन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो ट्वीटमा समवेदना र सराहना प्रस्तुत गरेका छन् । भारतका प्रसिद्ध पत्रकार गुरुमुर्तीले पनि स्वामीले मठलाई केवल अध्यात्ममा मात्र नराखि समाजसेवा र समाज परिवर्तनको धारमा पनि लगेको बताएका छन् ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Feb 13 2018
'शिव'लार्इ चिन्नुहोस् ?
शिव भन्ने बित्तिकै जटा पालेको डमरु त्रिशुल धारण गरेको बाघको छाला लगाएको यस प्रकारको स्वरूप हामीले सम्झिन्छौँ । के यही स्वरूप शिव हो वा के हो त शिव भनेको ?
Suyog Dhakal - Feb 12 2018
यस ब्रह्माण्ड एउटा बिशालकाय शुन्यता र महाघटना अनि त्यसको परिघटनाका रुपमा घटिरहेको छ । बाँकी त केवल शुन्यता मात्र त हो, त्यस शुन्यता नै शिव हुन् । शिव एउटा शक्ति हो, उर्जा हो जसले शुन्यतालाई सम्बोधन गरेको छ । शुन्यता बाटै उत्पन्न यस ब्रह्माण्डका हरेक कुराको गर्भ शुन्यता नै हो अनि अन्त पनि, यस अर्थमा शिव नै आदि अनि अन्त हुन् । सम्पूर्ण कुरा शिव बाटै आएर शिव मै सकिने हो ।
शिवलाई पशुपति किन भनिन्छ ?
आफूमा नियन्त्रण अनि सन्तुलनको सर्वश्रृष्ठ दृष्टान्त नै भगवान शिव हुन् । शिव तसर्थ ति मात्र हैनन् जो केवल नशामा लीन भनेर बुझिन्छ, शिव त ति हुन् जसले बिष पिएर निलकण्ठ बनेर गोसाँईकुण्डमा पीडा सहन गरेर बसिदिए । शिवको यो नियन्त्रण र सन्तुलनको एउटा मात्र पक्षलाई अवलम्बन गरेर शिवमार्ग लाई नशासंग जोडिनु चाँही लज्जास्पद हो ।
Suyog Dhakal - Feb 11 2018
इतिहासमा प्रथम महिला शंकराचार्य
वैदिक सनातन हिन्दु धर्मको सर्वोच्च गुरुको इतिहास शंकराचार्यसंग जोडिएको छ। यस वर्ष भने शंकराचार्यको पदमा नेपाली चेली हेमानन्द गिरीलाई पनि भारत धर्म महामण्डल एवं काशी विद्वत परिषद्ले भारत उत्तराखण्डको बद्रीकाश्रम ज्योतिर्पीठको शंकराचार्य छनौट प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म लिएर गएको छ ।
एकफर पावर्तीले शिवलाई संसारको सबैभन्दा ठूला पाप र धर्म के हो भनि प्रश्न गर्नुभएका थियो । शिवले यस प्रश्नको उत्तर एउटा सस्कृतका श्लोकले दिएका थिए, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकं परम्। जसको अर्थ हुन्छ सदैव सत्यका पक्षमा रहनु अनि निष्ठा गर्नुनैै मानव जिवनको मुख्य धर्म हो । तर यसरी सत्यको साथ नदिनु अनि सत्य तर्फ नरहनु नै सबैभन्दा ठूला पाप हो । सत्यको पक्षमा रहनु र अरुलाई हानी नगर्नु र असत्यको पक्षमा नरहनुलाई शिवले जोड दिएका छन् । सत्य मार्गलाई शिवले धेरै प्रार्थमिक्ता दिँदै भक्ति भन्दा पनि कर्मलाई धेरै जोड दिएको पाइन्छ ।
- Jan 31 2018
ग्रहणका समयमा पर्ने असरहरु
पृथ्वीमा यस ग्रहणको समयमा धेरै कुराहरु हुन्छन्, धेरै कुरा नदेखिने जस्ता भएकाले प्रभाव शुन्य मानिन्छ जून गलत हो । आफ्नो प्राकृतिक अवस्था गुमाएका बस्तु या जिवहरु द्रुत गतीमा स्वरुप त्याग गर्दछन् । त्यसैकारणले काँचो तरकारीहरुमा खासै परिवर्तन नभएपनि पकाएका तिनै तरकारीहरुको स्वरुपमा अनि अवस्थितीमा परिवर्तन हुन्छ । खानेकुराका प्राकृतिक पोषण अवयवहरु ग्रहण पश्चात बिषमा परिवर्तन पनि हुन सक्दछन । हानीकारक बिषका रुपमा तत्कालै असर नदेखाएपनि ग्रहणपश्चातका समयमा पकाएका भोजनको प्राकृतिक गुणहरुमा ह्रास आँउछ ।
ज्यो.पण्डित नारायण प्रसाद दुलाल - Jan 31 2018
'खग्रास चन्द्रग्रहण' तथा अाजको दिन विशेष राशिफल जान्नुहोस्
अाजको खग्रास चन्द्रगहण विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देखिनेछ । हाम्रो देश नेपालमा भने साँझ ०५/५५ मिनेटमा चन्द्रोदय हुने भएकाले साँझ ५ बजेर ५५ मिनेटबाट केहि अंश ग्रहण लागिसकेको अवस्थामा देखिनेछ । नेपाली समय अनुसार साँझ ५ बजेर ३२ मिनेटमा स्पर्श हुनेछ र साँझ ६ बजेर ३६ मिनेटदेखि सम्मिलन अर्थात् पूर्ण खग्रास प्रारम्भ भर्इ साँझ ७ बजेर १६ मिनेटमा खग्रासको अन्त्य हुँदै रात्री ८ बजेर ५७ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ ।
Suyog Dhakal - Nov 30 2017
हिन्दुहरु ले किन दियो बाल्दछन् ?
भागवत गीताको ९: २६ श्लोक जहाँ भगवान श्री कृष्णले स्वयम आफ्ना भक्तहरु ले श्रद्धाका साथ फुल, फल, पात या जल जे चढाएपनि हर्षका साथ स्वीकार्ने भन्नुभएको छ । बैदिक कालमा दियो या बत्ति भन्दा पनि यज्ञ, होम इत्यादिमा बढि चलन रहेको पुष्टि हुन्छ । भागवत को यस श्लोकले पनि श्री कृष्ण स्वयमले फुल, पात, जल या फल संगै बत्ति या दियो को उल्लेख नगरेकाले दियो चलन पछि आएको भान हुन्छ । क्रमश बैदिक कालवाट पौराणिक काल सम्म आँउदा दियो अनि बत्ति बाल्ने चलन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
Suyog Dhakal - Nov 25 2017
दलाई लामाले ठहर्याएका बुद्धको जन्मभूमि
भारतसंग जोडेको झिनो स्पष्टिकरण पनि दिए । भारतबर्ष लाई भारतीय परिचय संग मात्र जोड्ने दुख्खदायी कार्य यि महान अनि ज्ञानी गुरुले किन गरे ?
सीतारामको प्रेम कथा
बाल्मीकि रामायणको अध्ययन पश्चात म निष्कर्षमा पुगें, यो हो नि त प्रो भनेंको । सीतारामको कथालाई बिवाह संग हैन प्रेम संग बढि जोडेर हेरिन जरुरी छ । रामायणको तुल्सीदास अनि बाल्मीकि दुबैको पुस्तकहरु पाइन्छ, तुल्सीदासको रामायणलाई धेरै सम्म बिचारप्रधान लेखनका रुपमा लिइन्छ भनें बाल्मीकिको रामायण लेखनलाई यर्थाथ चित्रणका रुपमा लिइएको छ । हजारौं बर्षअघिका यि प्रसंगलाई यिनै पुस्तकहरु ले नै त हामीमाझ जिवीत राखेका छन नि हैन त ?
परापूर्व काल देखिनै समान बिधी र परम्परा अनुरुप छठ पर्व गरिंदै आएको इतिहास छ । रिग्वेद को सूर्य अनुष्ठान बिधी अनुरुप नै यस पर्वको अनुसरण हुँदै आएको पनि बताइन्छ । महाभारतमा द्रोपती ले छठ पूजा गर्दा गाएको सस्कृतको कविता पनि सूर्य अनुष्ठान गर्ने जाप भएको बताइन्छ ।
Suyog Dhakal - Oct 19 2017
लक्ष्मीपूजा मनाईने १० वटा कारणहरु
फेस्टीवल अफ लाईटस् अर्थात उज्यालोको चाड तिहार बिश्वभरिनै हरेक समुदाय र सम्प्रदायका मान्छेले मनाउने चलन छ । बिश्वमा झिलीमीली को कमी त कहाँ होला र ? तथापी दिपावली को झिलीमीली अनि रौनकमा भएको त्यो उज्यालो मा बर्षभरिका अध्याँराहरु बगेर जाने गर्दछन् ।
- Oct 16 2017
- Sep 30 2017
टिका जमरा ग्रहणको शुभ साइत बिहान ११:५५ बजे
सम्पूर्ण अाह्वान गरीएका देवीदेवताहरूलार्इ, इष्टदेवहरूः कूलदेव, पितृदेवहरूलार्इ चढाइसकेपछि घरको मूल ब्यक्ति, जेठोबाठोको हातबाट शुभ साइतपारी टिकासंगै जमरा ग्रहण गरी बिजयादशमी उत्सव मनाइने गरीन्छ । यस पटकको टिका जमरा ग्रहणको शुभ साइत बिहान ११ः५५ बजे परेको तर माता माता दूर्गाको प्रसाद ग्रहणकालागि कुनै विशेष समय कुर्नु नपर्ने यस शुभदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ !
Suyog Dhakal - Sep 15 2017
रावणको महिमा "रावणायण"
बाल्मिकी रामायणले खलनायक का रुपमा रावणलाई प्रदर्शन गरेको छ, जसरी अध्याँरो बिना उज्यालो संभव छैन त्यसै गरि खलनायकको भुमिका बिना नायक पनि संभव छैन । रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम बनाउन रावणको भूमिका पनि चर्चा योग्य छ । कहिलेकाँही रामायणले रावणलाई अन्याय गरेको जस्तो पनि भान हुन्छ ।
- Aug 18 2017
गाईको महीमा हिन्दु धर्म र सनातन संस्कारमा अत्यन्त महत्पवूर्ण र मातृसम्मान रुपमा गरीन्छ । गौदान अर्थात गाईको दानलाई सबैभन्दा पूण्य दिने दानहरुसँग तुलना गरिन्छ भनें गौहत्या भनें सनातन धर्ममा एउटा घृणीत अनि निकृष्ट दानवीय पाप हो । आखिर किन छ त पूर्विय दर्शन अनि सनातन सस्कारमा गाईको यो स्थान आउनुहोस् आज उत्खनन गरौं शदियौं देखि चलिआएको यो अनन्त समबन्धको कारक कुराहरु ।
- Aug 14 2017
भगवान श्री कृष्णको भजन संग्रह
सबैका प्यारा भगवान श्री कृष्ण आजैको दिन मामा कंशको कैदमा रहेका पिता वासुदेव र माता देवकीको गर्भबाट जन्मनु भएको थियो । आज संसारभरका हिन्दु धर्मावलम्वी अनि श्री कृष्णका भक्तहरुले आफ्नो प्रिय भगवान कृष्णको जन्मदिवस मनाउँदैछन् ।
Suyog Dhakal - Aug 14 2017
कृष्ण र राधाको अदितृय प्रेमकथा...
राधा र कृष्णको प्रेमकथाको बिषय बास्तवमै संसार अनि सनातन दर्शन अबलम्बन गर्नेहरुकालागि एउटा रसिक अनि उत्प्रेरक कुरा हो । पहिले राधा अनि कृष्णको नाम लिइन्छ, नारीभावको यो प्रधानता सनातन दर्शनमा सदैव थियो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ ।
नागपञ्चमी तथा जनै-पूर्णिमा एकैदिन !
तर, यस पटकको रक्षावन्धन तथा यज्ञोपवितधारण ऋषितर्पणी पूर्णीमाका दिन नगरी नागपञ्चमीका दिन गर्ने भन्ने कुराले आम जनमानसमा यो कसरी हुनगयो भनी जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । कतिले त पूर्णीमा र पञ्चमी विलकुलै फरक फरक तिथिहरु एकै दिन कसरी पर्न सक्छन् ? यो असम्भव कुरा हो भन्ने तर्क समेत राख्नु भएको छ ।
रमादान विशेषः कुरानका पवित्र सन्देशहरु
रमादानको महिना चलिरहेको छ, श्रद्धाकासाथ ब्रत बस्नेहरु संसारभरि रमादानको महिमाको लाभ उठाइरहेका छन् । हाम्रो पात्रो मार्फत आउनुहोस केही पवित्र कुरानका कुराहरु रमादान विशेष यस महिनामा उक्काउन चाह्यौ, यि कुरा अनि वाणीहरुले सबै मुसलमान दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा सकारात्मक कुराहरुको सञ्चार गरोस् र शान्ति कायम होस्, सबैको जीवनमा ।
Suyog Dhakal - May 10 2017
मनको शान्ती, बुद्धका वचनहरु
एकफेर बुद्ध आफ्ना अनुयायीहरु सँगै एउटा शहरवाट अर्को शहरमा जाँदै गर्दा एउटा ठूलो ताल पार गरेर जानुपर्ने भयो । तालको छेउमा एउटा ठूलो वृक्षमुनी सुस्ताँउदै बुद्धले एकजना अनुयायीलाई आफूलाई तिर्खा लागेकाले गएर तालवाट पानी ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
Bishwa Raj Adhikari - Apr 18 2017
"विश्वगीता"को सत्रौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीताको आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को सत्रौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्यायको लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको सत्रौं अध्यायका २८ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Apr 11 2017
"विश्वगीता"को सोह्रौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीताको आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को सोह्रौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्यायको लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको सोह्रौं अध्यायका २४ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
देव प्रसाद गाैतम - Apr 06 2017
संक्षिप्त रामायण (अडियो सहित)
शृष्टीको आदीकाल देखिनै पृथ्वीमा भगवानको अवतार हुन्छ । द्वापर युगमा रघुकुलका राजा दशरथलाई सन्तान भएन । उनले पुजेष्ठी यज्ञ गरे , यज्ञ अग्निकुण्डबाट प्रसाद प्राप्त भयो र राजा दशरथले पत्नीहरुलाई त्यो प्रसाद खुवाए । त्यसपछि राजाका तीन रानी, जेठी कौशल्याबाट राम, माहिली शुमित्राबाट शत्रुघ्न र लक्षमण र कान्छी कैकैयीका कोखबाट भरतको जन्म भयो ।
Bishwa Raj Adhikari - Mar 21 2017
विश्वगीताको तेह्रौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीताको आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को तेह्रौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको तेह्रौं अध्यायका ३५ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Mar 14 2017
विश्वगीताको बाह्रौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीताको आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को बाह्रौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको बाह्रौं अध्यायका २० श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Feb 28 2017
विश्वगीताको एघारौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीताको आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को एघारौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको एघारौं अध्यायका ५५ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Suyog Dhakal - Feb 24 2017
पशुपतिनाथको माहौल, महाशिवरात्री बिशेष
आजको दिन विशेष दिन्, शिवरात्रीको दिन । आराध्य देव शिव शम्भो अाशिन पूण्यभूमी पशुपतिनाथमा आज लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालु भक्तजनको विशेष घुँईचो छ । फरक रुप फरक पहिरन अनि फरक बोली भए तापनि सबैको एउटै बोल छ, हरेक पाईलाहरुको एउटै गन्तब्य छ अनि हरेक मनको एउटै तिर्सना, जय शम्भो !
Bishwa Raj Adhikari - Feb 21 2017
विश्वगीताको दशौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीता को आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को दशौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको दशौं अध्यायका ४२ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Feb 14 2017
विश्वगीताको नवौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीता को आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को नवौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको नवौं अध्यायका ३४ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Feb 07 2017
विश्वगीताको आठौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीता को आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को आठौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको आठौं अध्यायका २८ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Jan 31 2017
विश्वगीताको सातौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीता को आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को छैठौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको सातौं अध्यायका ३० श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
Bishwa Raj Adhikari - Jan 24 2017
विश्वगीताको छैठौं अध्याय
लेखक विश्वराज अधिकारीको श्रीमद भागवत् गीता को आधुनिक व्याख्या "विश्वगीता"को छैठौं अध्याय आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौ । श्रीमद भागवत् गीताको १८ अध्याय को लगभग ७०० श्लोकहरुमा मानव जीवनको सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ । विश्वगीताको पाचौं अध्यायका २९ श्लोकहरु यसप्रकार छन् ।
- Feb 10 2017
Bishwa Raj Adhikari - Jan 04 2017
विश्वगीताको चौथो अध्याय
अध्याय ४ , श्लोक ०१ भगवान् श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नु भयो ( यो अविनाशी योग विज्ञान पहिले मैले सूर्यलाई भनेको थिएँ, सूर्यले मनु, मनुले इक्ष्वाकुलाई सुनाएका थिए। ) ﻿श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेSब्रवीत्।।१।।
अध्याय ३ , श्लोक ०१ अर्जुनले बिन्ती गरे (हे केशव, हजुरको विचारमा यदि आध्यात्म ज्ञान लालसायुक्त व्यवहार भन्दा उत्तम हो भने मलाई किन यो घोर डरलाग्दो युद्ध गर्न भन्दै हुनुहुन्छ, हे जनार्दन।) ﻿अर्जनु उवाज ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।।१।।
Bishwa Raj Adhikari - Dec 20 2016
विश्वगीताको दोस्रो अध्याय
अध्याय 2, श्लोक 01 सञ्जयले भने (अर्जुनका आँखाहरू दयाले अभिभूत हुँदै आंशुले भरिए। उनी दु:खमा डुबे। अर्जुनको यस्तो अवस्थामा मधुसूदनले यी शब्दहरु भन्नु भयो।) ﻿सञ्जय उवाच तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन:।।१।।
विश्वगीताको पहिलो अध्याय
अध्याय १, श्लोक 01 धृतराष्टले भने (हे सञ्जय, युद्धका इच्छाद्वारा धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमा जम्मा भएका मेरा र पाण्डु पुत्रहरूले के गरे?) धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव:। मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय।। १।।